May 2018 – News Portal
दाङ, १६ जेठ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७४ को लागि घोषणा गरेको बजेटमा दाङ कतै देखिएको छैन । सभामुख र मुख्यमन्त्रीको जिल्लामा सोचेजस्तो ठूला योजनाहरु प्रस्तुत नभएपछि जिल्लाबासीहरु निरासा छाएको छ । सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्ने वेलामा दाङमा दुईवटा योजना मात्रै प्रस्तुत गरेको छ । दाङ तोकेर सरकारले भएको विमानस्थलको ब्यवस्थापनमा चासो नदिएर विमानस्थलको विकल्प खोजेको छ । बैकल्पिक विमानस्थलको […]
May 31, 2018 epradeshLeaveaComment on देउखुरीमा आगलागी, एकको मृत्यु
आठ घरगोठ जले देउखुरी, १६ जेठ । आगोमा जलेर गढवा एक महिलाको ज्यान गएको छ । गढवा गाउँपालिका–३ सुकैला गाउँकी ४० बर्षीय लक्ष्मी रावतको जलेर मुत्यु भएको हो । लक्ष्मीको आगोमा जलेर मृत्यु भएको ईलाका प्रहरी कार्यालय गढवाका प्रहरी निरिक्षक प्रमोद क्षेत्रीले जानकारी दिए । लक्ष्मीले घरमा कोही नभएको समयमा आगो लगाएको प्रहरी निरिक्षक क्षेत्रीले बताए । आगलागीबाट त्यो बस्तीमा […]
May 31, 2018 epradeshLeaveaComment on घाइते चित्तलको उद्धार
गढवा, १६ जेठ । गढवामा घाइते अवस्थामा फेला परेको चित्तललाई स्थानीयको पहलमा जंगलमा छोडिएको छ । गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ बालापुरमा बुधबार बिहान ५ बजे स्थानीय दामोदर ढुङ्गानाको घरको कोठामा चित्तल लुकेर बसेको अवस्थामा फेला परेको थियो । घाइते चित्तलको दुबै सिङमा र शरीरको केही भागमा चोट लागेको अवस्थामा फेला परेको ईलाका वन कार्यालयका सहायक […]
May 31, 2018 epradeshLeaveaComment on जनप्रतिनिधिलाई तलब दिने निर्णय
तुलसीपुर, १६ जेठ । प्रदेश नम्वर ५ ले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । विधेयक पारित भएसँगै ५ नम्वर प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले सेवा र सुविधा पाउने भएका छन् । यसअघि प्रदेश सभाबाट कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएका कारण झण्डै एक वर्षसम्म पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक सुविधा पाउन सकेका […]
May 31, 2018 epradeshLeaveaComment on शारदा नगरपालिकामा सुझाव संकलन
सल्यान, १६ जेठ । शारदा नगरपालिकाले सल्यान जिल्लामै पहिलो पटक बृहत् सुझाव संकलन कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । आगामी बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, भौतिक पूर्वाधार, उद्योग र मानव संसाधन क्षेत्रमा नगरलाई कसरी समुन्नत गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सुझाव संकलन गरिएको हो । सर्वपक्षीय भेलामा जिल्लास्थित राजनैतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला […]
May 31, 2018 epradeshLeaveaComment on मेयरकप फुटबल प्रतियोगिताका लागि खेलाडी छनौट
तुलसीपुर, १७ जेठ । तुलसीपुरमा जेठ २५ गतेदेखि सुुरु हुन लागेको मेयरकप फुटलवल प्रतियोगिताका लागि खेलाडि छनौट सुरु गरिएको छ । प्रतियोगितमा भाग लिन उपमहानगरपालिकाका १९ वटै वडाबाट छनौट भई आएका खेलाडीहरुले मात्र प्रतियोगितमा भाग लिन पाउने छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्वर ५ का वडा सदस्य सुरेशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा फुटवल कोच रुपलाल श्रेष्ठ र […]
May 31, 2018 epradeshLeaveaComment on नेपाल किन नरक भूमि बन्दै गयो ?
गुरुप्रसाद शर्मा रेग्मी असीको खुड्किलो पार गरिसक्नु भएका एकजना जेष्ठ नागरिक हाम्रो घरमा आउनुभएको थियो । उहाँले मलाई सोध्नुभयो । विगतको स्वर्गभूमिको रुपमा रहेको नेपाल आज किन नरक भूमिमा परिणत हुँदैछ । प्रश्नको जवाफ दिनु नै थियो । त्यसैले मैले भनिदिए ‘विगतको आहारविहार, विचार र व्यवहारको शुद्धताले स्वर्गीयताको अनुभूति हुने गर्दथ्यो तर आजको आहारविहार, विचार र व्यवहारको अशुद्धता र […]
बजेटमा महत्व नपाएको दाङ
May 31, 2018 epradeshLeaveaComment on बजेटमा महत्व नपाएको दाङ
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को लागि सरकारले मंगलबार बजेट प्रस्तुत गरेको छ । १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाखको नेपालको कुल बजेट डा. युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रीको हैसियतले संसद्मा प्रस्तुत गरेका छन् । विगतको वर्षको भन्दा यो बजेट निकै महत्वकांक्षी र ठूलो बजेट देखिएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतको सरकारले ल्याउने बजेटमा सबैको भावना र अपेक्षा समेटिने विश्वाससमेत […]
May 29, 2018 epradeshLeaveaComment on मोवाइल संघको आर्थिक सहयोग
लमही, १५ जेठ । दुबै आँखामा मासु पलाएर बिरामी परेकी लमही नगरपालिका वडा नम्बर ३ मजगाउँकी अनिता चौधरीलाई सहयोग रकम हस्तान्तरण गरिएको छ । देउखुरी मोबाइल संघले मंगलबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी आँखाकी बिरामी अनिता चौधरीलाई सहयोग हस्तान्तरण गरेको हो । देउखुरी मोबाइल संघका अध्यक्ष जागेश्वर बस्यालको अध्यक्षता एवं लमही नगरपालिका वडा नमबर ३ का […]
कोर्क आयरल्याण्ड, १५ जेठ । नेपालमा संघीय गणतन्त्र स्थापनाको ११औँ वार्षिक अवसरमा आयरल्याण्डको कोर्क सहरमा ‘सम्बृद्ध नेपाल र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ आयरल्याण्ड, नेपाली जनसम्पर्क समिति आयरल्याण्ड, कोर्क नेपाली समाज कोर्कको संयुक्त आयोजनामा आयरल्याण्डमा रहेका नेपाल आयरल्याण्ड समाजलगायतका अन्य संघसंस्थाको सहयोगमा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रमको संयोजन […]